Martech Hadda waxaa laga heli karaa Google Currents | Martech Zone
Isniin, Disembar 12, 2011 Khamiis, Juun 20, 2017 Douglas Karr
Haddii aad haysato taleefan casri ah ama 'Tablet', daawashada degellada internetku waxyar bay kugu noqon karaan caqabad. Google waxay u timid badbaadinta iyadoo Google Currents.
Google Currents waa Google Reader oo ku saabsan steroids, xitaa u oggolaanaya daabacayaasha inay hagaajiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin ayna abaabulaan iyagoo adeegsanaya Soosaarahooda Google Currents.
Hubso inaad iska qorto Martech ee Google Currents. Waxaan heysanaa dhamaan qeybaheena oo kala qeybsan, barnaamijkeena raadiyaha, fiidiyowyada iyo xitaa kuwayaga Nuxurka Google+!
Tags: socotagoogle Googlegoogle +ipadiphonekiniin
Subdomains, SEO iyo Natiijooyinka Ganacsiga